Himalaya Dainik » नेपाली फिल्ममा स्टार नायिकाः निरुता र रेखापछि को ?
नेपाली चलचित्र ‘हिरो’बाट रजतपटमा प्रवेश गर्दै गर्दा नायिका रेखा थापाले जर्ब-जस्त स्टारडम बनाउँछिन् भन्ने कमैले मात्र सोचेका थिए । नायिका रेखा थापाको स्टारडम चलचित्र क्षेत्रमा लोभलाग्दो तरिकाले अगाडि बढेकाे थियाे । नेपाली चलचित्रमा नायिकाहरुको स्टारपावर निकै कमजोर रहेकाे छ ।
यसैले, पनि रेखा थापाको ल-फडा त्यो बेलामा नाम चलेका नायक निखिल उप्रेती, विराज भट्टदेखि आर्यन सिग्देलसम्म
रेखाको चलचित्रमा काम गरेका आर्यन सिग्देल, जीवन लुइटेल हुन् या विराज भट्ट नै किन नहुन्, सबै रेखाको अघि ओझेलमा नै परे । चलचित्र क्षेत्रमा रेखा खेलेको चलचित्रमा नायकको काम हुँदैन पनि भनिन्थ्यो । यसैले, पनि रेखा थापाको ल-फडा त्यो बेलामा नाम चलेका नायक निखिल उप्रेती, विराज भट्टदेखि आर्यन सिग्देलसम्म पर्यो ।
रेखा थापाले नायिका निरुता सिंहको दबदबा तो-डेकी थिइन् । निरुता सिंहको रोनाधोनामै दर्शक रमाएका थिए । निरुताकै नाममा पनि चलचित्रले लोभलाग्दो व्यापार गर्थे । निरुता सिंहले अभिनय गरेका थुप्रै चलचित्रले सय दिनको व्यापार गरेका छन् । निरुताले आफ्नो समयमा त्यो बेलामा चलेका नायकहरु बराबरको पारिश्रमिक लिने गर्थिन् ।
निरुता र रेखाअघि पनि थुप्रै नायिकाहरुले चलचित्र क्षेत्रमा क्रेज नबनाएका होइनन् । चलचित्र आफ्नै नाममा चलाउने हकमा भने धेरै नायिकाहरु सफल भएनन् । करिश्मा मानन्धर, विपना थापा, जल शाह, कृष्टी मैनाली, पूजा चन्द, झरना थापा लगायतका नायिकाको क्रेज पनि चलचित्र क्षेत्रमा नभएको भने होइन । रेखा थापापछि उदाएका नायिकामा प्रियंका कार्की, केकी अधिकारी, नम्रता श्रेष्ठ, साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह, पूजा शर्मा, स्वस्तिमा खड्का लगायतका नायिका पर्छन् ।
यसमाथि, नायिकाहरु सामाजिक संजालमा हिट चलचित्रमा असफल हुँदा दर्शकको नजरमा पनि पर्न सकेका छैनन् । प्लस टू जेनेरेशनबाट अहिलेको यूवापुस्ता बाहिर जान सकेको छैन । निरुता सिंह, रेखा थापाको नाम गाउँका कुना–कुनामा अहिले पनि सुनिन्छन् । यसपछि उदाएका नायिकाहरु केही शहरका कुनामा मात्र सिमित छन् । त्यसैले अब निरूता र रेखा पछि को बन्ला त स्टार नायिका ? त्यो अब समयले नै बताउला ?